Somaliland iyo Maraykanka: ma bog cusub ayaa u furmaya siyaasaddii geeska? | Qaran News
Writen by Qaran News | 7:50 pm 12th Jan, 2022
XIGASHADA SAWIRKA,TAIWAN GOVERNMENT
Somaliland sida ka muuqata waxa ay si cad u kala doorteen Maraykanka iyo Shiinaha. Xidhiidh korayey oo imika u muuqda in uu marayo meel aad u sarraysa waxa ay la yeesheen Taiwan – oo sheegata in ay ka madaxbannaan tahay Shiinaha, tabta Somaliland ku tahay Soomaaliya.
“Waa guul laga gaaray xiriir diblumaasiyadeed ee naadirka ah ka dib markii ay Taiwan xiriir la yeelatay gobolka madaxa bannaan ee Somaliland”, ayaa lagu qoray wakaaladda wararka ee Mareykanka ee Associated Press
“Hore wuu u jirey xidhiidh u dhexeeya Somaliland iyo Maraykanka. Weliba xilligii Daahir Rayaale madaxweynaha ka ahaa Somaliland waa uu sarreeyey. Laakiin tobankii sano danbe waxaa iska beddelayey oo halkii hore wuu ka hooseeyey. Se kollayba ma aha xidhiidha hadda la yabyabayo oo la bilaabayo” ayay sheegtay Ayaan Maxamuud, oo hore wakiil ugu ahayd Somaliland ku metela dalka Ingiriiska.
Shiinaha ma ku dhacaa inuu weerarro Taiwan?
“”Aragtidaydu waxay tahay in Maraykanku uu si aad ah ula macaamilo Somaliland. Habka ganacsi ee Shiinaha ee qaaradda, iyo xaqiiqda ah in ay isticmaalaan awoodooda dhaqaale ee si ay u helaan tanaasulaad ka timaada dalalkan, tani waa fursaddii Maraykanku ku ballaadhin lahaaa joogitaankooda diblomaasiyadeed ee geeska” ayuu yidhi Van.
Ayaan, ayaa iyana qabta aragti ka agdhaw taas oo ah in laba dhinac – Somaliland iyo Maraykanku ay si fudud isula jaanqaadi karaan, marka loo eego waxyaalaha badan ee mideeya.
“Maraykanka waxaa saamaynaya xaaladda geeska oo qasan oo rejo badan laga qabay toban sano ka hor, Soomaaliya, Itoobbiya iyo Suudaan oo khilaafyo siyaasadeed ka jiraan markaad eegto Kenya iyo Somaliland ayaa xaaladoodu deggan tahay. Markaa Somaliland waa dimuqraaddi, wayna deggan tahay, cilaaqaadna lama leh shiinaha markaas taas ayaa u sahlaysa in ay isla jaanqaadaan Maraykanka iyo Somaliland” ayaa ay sheegtay Ayaan Maxamuud.
Calamada Mareykanka iyo Shinaha oo darbi lagu xardhay
“Maraykunku wuxuu u baahanyahy meel uu isku hubo oo khatarahaasi aanay kasoo gaadhayn. Dhinaca kalena waxaa tartamaya dalalka dimuqraaddiga iyo kuwa aa dimuqraaddiga ahayn, qaar Shiinaha, ruushka iyo Iran ayaa horkacaya. Halka dhanka kalena Maraykanka, Taiwan iyo dalalka la halmaalaa ay calanka u sidaan, markaa Somaliland safkan danbe ayay si dabeeci isku waddo u yihiin oo isugu xidhmayaan”. ayaa ay tidhi Ayaan.
Machadka The Heritage Foundation oo ka dhisan Maraykanka ayaa isna qoraal uu dhawaan ka sameeyey baaqyada Somaliland iyo Maraynkanka ciwaan uga dhigay ‘Maraykanku waa in uu aqoonsadaa Somaliland’.
“Aqoonsigu wuxuu sidoo kale kor u qaadi doonaa ajendaha dimoqraadiyada Mareykanka iyadoo lagu abaalmariyo dowlad iyo dadkeeda oo ku noolaa go’aan dhab ah oo dimoqraadiyad ah soddon sano waxayna u suurtagelineysaa Washington inay bixiso taageero aan kala go ‘lahayn si ay uga caawiso inay sii horumariyaan dowlad matalaysa.”
Somaliland muddooyinkii u danbeeyey waxaa muuqatay in ay xidhiidho cusub la yeelanayso dalal badan iyada oo madaxdeeda wasaaraddda arrimaha dibaddu ay safarro kala duwan ku kala tageen, waddamo ka mid ah Afrika, Bariga dhexe, Yurub iyo Ameerikaba. Kuwaas oo isbeddel hor leh u ahaa qaabkii ay Somaliland u waajhi jirtey waayaheeda ‘ictiraaf raadinta.